Mitafy Loko Matevina China Manufacturers & Suppliers & Factory
Mitafy Loko Matevina - mpamokatra, orinasa, mpamatsy avy any Shina
(Total 24 vokatra ho an'ny Mitafy Loko Matevina)
Tsara ny vokatra tsara indrindra amin'ny sarimihetsika marefo AF dia karazana fluorocarbon, izay niomana tamin'ny fluorosilicon izay voatahiry Resin. Ny fiakaran'ny anti-fingerprint dia manana fiantraikany tsara amin'ny tsy hydrophilic sy tsy lipophilic. Mifanaraka amin'ny fomba mahazatra...
Tsy misy volom-borona mangatsiaka ho an'ny sarimihetsika marefo [ P specification] Bika Aman 'endrika: Colorless na mavo rano mangarahara AF dia karazana fluorocarbon coating, izay nanomana ny specia lly narafitra fluorosilicon Resin. Ny fiakaran'ny anti-fingerprint dia manana fiantraikany tsara...
Toe-jiro mahazatra 54 ℃ fanadiovana matevina
Hydrofluoroether mety ho tebiteby ho an'ny fikolokoloana sarotra Ny hexafluoropropyl methyl ether dia ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / lantihy, ny...
Vahaolana tsy misy loko sy tsy misy fanafody ho an'ny kristaly
Fanadiovana tsy misy maso sy tsy misy sakafom-baravarankely Orinasa mavitrika, anarana simika : hexafluoropropyl methyl ether Fanafody hydrofluoro ety dia vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana, izay sady tsy misy loko sy tsy misy poizina, sady tsy misy poizina sy tsy misy mampidi-doza, ary mitoka-monina. Ny...
Vahaolana tsy misy loko sy tsy misy fanafody ho an'ny faritra vita amin'ny Precision
HFE tsy misy loko sy tsy misy fanafody famonoana volo Precision Fifandraisana matotra: Noho ny toetrany avo lenta, ilaina ny fitaovana ankapobeny raha tsy misy ny alkaola mafy, ny asidra mafy sy ny fanerena mafy. Noho ny fiantohana, dia omen'ny mpampiasa ny fitsapana fifanarahana sy ny fanombanana ankapobeny...
Mitafy Loko Matevina Mitafy loko matevina Fiarovan-doko matevina Kitapo Coating Kitapo solosaina Mpanao anti-orana Kitapom-biby fiarakodia anatiny Miloko fanodinana fiara